Landa imeko yakho yokujonga inkuthazo kwi-IRS | XperimentalHamid
Iindaba ezimnandi ngoku ungasebenzisa i-IRS 'tracker ekwi-Intanethi ukujonga imeko ye-coronavirus stimulus yokujonga imeko yokuhlawula kwi-intanethi.
Ukutshekishwa kokuqala kwenkuthazo ye-COVID-19 kuye kwaphuma kwangoko kule nyanga
Ngolwazi oluninzi oluhlaziyiweyo nolusemthethweni kunye neendaba malunga ne-coronavirus COVID-19 bhubhane, ndwendwela WHO.
Ukuba ulindele intlawulo, umbono we-IRS ungathatha ezinye iiveki ezingama-20 ukuthumela yonke intlawulo yokukhuthaza ngeposi.
I-arhente yomanyano i-IRS sele ithumele umjikelo wokuqala wokutshekishwa kwamaphepha kwabo bakulungeleyo ukufumana intlawulo yovuselelo.
I-IRS idlulisile Iintlawulo ze-coronavirus I-aka stimulus itshekhi ukuya kuthi ga kwi-1,200 yeedola ngokufaka ngqo kwiakhawunti yebhanki phantse ye-90 yezigidi zabemi base-US abahlangabezana nemigaqo.
Kodwa ukuba usalindele, ufuna ukwazi ukuba ngowuphi umhla i-IRS enokuthi icwangcise intlawulo yakho yezoqoqosho. Iindaba ezimnandi zezokuba, i-IRS isungule uhlaziyo Fumana intlawulo yam yesoftware ye-APP ukwenza kube lula ngakumbi kuwe ukuseta kunye nokulandela imeko yexabiso lakho.
Iintlawulo ze-coronavirus zifumana isixhobo sam sokuhlawula
Ukuba unayo eminye imibuzo malunga nenqanaba lemali yakho: iphi itsheki yam yokuvuselela kwaye ndifumana malini? kwaye Ndingayifumana njani intlawulo yokuvuselela? iindaba ezisemthethweni zezi, zingathabatha i-IRS ukuya kwiiveki ezingama-20 ukuthumela zonke iitshekhi.
Usenokufumana intlawulo yakho ngokukhawuleza ngokuseta imali yokuhambisa nge-elektroniki noorhulumente. Nokuba yeyiphi na indlela oyikhethayo, unokulandela umkhondo wenqanaba lakho ukuze ubone ishedyuli yakho yokuhlawula, kubandakanya noLuntu Abamkeli bezokhuseleko.
Ngaba abo bafumana ukhuseleko kuluntu bafumana ukhuthazo ngokuzenzekelayo
Siza kukubonelela ngesikhokelo sinyathelo nenyathelo malunga nendlela yokusebenzisa i-IRS 'ye-tracker ye-intanethi, ebizwa ngokuba yi-Get My Payment.
Yazi ukuba abanye abahlangabezana neemeko zokuhlawulwa koncedo lwezoqoqosho banengxaki yokufumana imeko yabo yokuhlawula kunye nokufaka ulwazi lwabo lwebhanki lwe-elektroniki ukuze babeke ngqo, siya kukuthumela uhlaziyiwe nje ukuba sifumane ulwazi.
Yimalini ekufuneka uyifumene ngaphandle kokwenza izibalo ezithile ingabonakali.
Intlawulo yakho yokugqibela iya kuxhomekeka kumgca kwifom yakho yerhafu ukusuka kwirhafu ka-2018 okanye ngo-2019.
Ukulandela umkhondo njani kwinqanaba lokujonga kwakho ukhuthazo kwi-IRS?
Ndazi njani ukuba inqanaba lokujonga inkuthazo iposile?
Ndiyakuqinisekisa njani ukuba ulwazi lwam lwesimo lichanekile kwaye unokwenza ntoni ukuba umyalezo wempazamo ubonisiwe?
Ngaba kufuneka ubhalise ukuze ufumane intlawulo yokukhuthaza?
Iingxaki ezinkulu onokujamelana nazo ngelixa ulanda umkhondo we-IRS yakho ekwi-intanethi?
Iintlawulo ze-IRS Stimulus kwiZinto zefayile ezingezizo fayile
Ukuba ukulungele ukuhlawula, i-IRS ikuvumela ukuba ulandele imali yakho kwiwebhusayithi yokuFumana iNtlawulo yam.
Ngenxa yokukhangela okuphezulu, ungawubona umyalezo omele uwulinde ngaphambi kokuba ufike kwindawo.
Nanga amanyathelo okujonga imeko yokujonga ukhuthazo;
Jonga inqanaba lesibini kunye nesibini sokujonga inkuthazo
Jonga imeko yenqanaba lesithathu lesikhuthazo
Jonga imeko yenqanaba lesine lesikhuthazo, isihlanu nesithandathu
Yiya kwi-IRS ' Fumana iphepha lam lokuhlawula
Cofa / Cofa iqhosha eliluhlaza Fumana intlawulo yam ukujonga imeko yentlawulo yezoqoqosho.
Kwiphepha elilandelayo cofa / ucofe Kulungile ukuze ugunyaziswe.
Kwiphepha le-Get My Payment faka amasimu afunekayo umz. Inombolo yakho yokhuseleko lwentlalo (i-SSN) okanye i-ID yerhafu (ITIN), umhla wakho wokuzalwa, idilesi yesitalato, kunye ne-ZIP yakho okanye ikhowudi yakho yeposi kwaye ucinezele ukuqhubeka
Kwiphepha elilandelayo, i-portal iya kubonisa imeko yakho yokuhlawula, nokuba icwangcisiwe okanye ukuba inkonzo ayikakwazi ukumisela imeko yakho.
Ukuba awusetanga ngqo kwi-IRS, inkonzo inokuhamba ngala manyathelo ukuze itshekhi yakho ithunyelwe ngqo kwiakhawunti yakho yebhanki.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, i-IRS yaqala ukunika intlawulo yokuqala yokukhuthaza kwizigidi zabemi base-US abasete ngqo kwi-IRS / Govt.
Abahlali abangakhange bamisele ngqo idipozithi banika ingxelo ukuba bazisiwe ngetsheki zabo baya kuthunyelwa ngeposi ngo-Epreli 24.
NgokukaNobhala Wezemali wase-US uSteven Mnuchin: Abo bafumana iphepha lokutshekishwa bazakufumana kungekudala, ukuqala kule veki…
Ngelishwa, imiyalezo edidayo ngelixa usebenzisa isixhobo sobume kunokwenzeka. Iindaba ezimnandi ze-IRS zikufumanele oko, Iwebhusayithi ye-IRS inecandelo elibanzi le-FAQ yoko.
Unokufumana umyalezo ukuba akunakwenzeka ukuqinisekisa isiqinisekiso sakho, umzekelo, okanye imeko yakho yokuhlawula ayifumaneki.
Qaphela: I-IRS ihlaziya ulwazi lwayo lokulandela umkhondo kubani onayo kwaye ongakhange ayifumane intlawulo yabo kanye ngosuku.
Iintlawulo ze-StS ze-IRS zee-non-fayile
Ukufumana intlawulo yokhuthazo, unokucela ukuba ufake iifayile zerhafu ngo-2018 okanye ngo-2019 ukuba uqhele ukwenza njalo.
Abemi abadala, abamkeli boKhuseleko lweNtlalo, umhlala-phantsi kaloliwe, Kwaye abanye abaxhamli ekungafunekiyo ukuba bagcwalise iifom zerhafu abazukufuna ukufaka enye ukuze bafumane intlawulo.
Abamkeli bezokhuseleko loluntu bayifumana nini inkuthazo
I-arhente iya kuthumela ileta kwidilesi yokugqibela yomrhafi eyaziwayo kwiintsuku ezili-15 emva kokuthumela intlawulo.
Ileta iyakuqulatha ulwazi malunga nokuba intlawulo yenziwe nini kwaye unika ingxelo njani kwi-IRS ukuba awufumananga itsheki.
Iingxaki ngelixa zilandelwa isikhuthazi sokujonga imeko ye-irs
Zama ukutayipha idilesi yakho kuzo zonke ii-cap
Ukhangele ixesha 'elingalunganga' losuku
Ufake ulwazi lwakho ngokungachanekanga
Usebenzise iRhafu yeTurbo, i-H & R block okanye ezinye iinkqubo zokulungiselela irhafu ukufaka iirhafu ezidlulileyo
Intlawulo yakho iyonke yenkuthazo isekwe kwimbuyekezo yakho yerhafu, ukuba sele uzifayilishe ngaphambi kokuba urhulumente andise umhla wokugqibela werhafu yomdibaniso kaJulayi 15
Ngokutsho kweWashington Post:
Izigidi ezininzi zabantu abafake iirhafu zabo nge-H & R Block, iTurboTax, kunye nezinye iinkonzo abakwazanga ukufumana intlawulo ngenxa yokuba i-IRS yayingenalo ulwazi lwedipozithi ngqo kwifayile, ngokukaNondyebo, iinkampani kunye neengcali.
Awubhalisanga imbuyekezo yerhafu ka-2018 okanye ngo-2019
Imbuyekezo yakho ka-2019 ayikenziwa
Awuhlali ufaka imbuyekezo, kwaye ulwazi lwakho alukho kwinkqubo
Awulungelanga ukufumana itshekhi yokukhuthaza
Khange uphendule kwimibuzo yokhuseleko ngokuchanekileyo
Utshixelwe ngokufutshane ngaphandle kwesiXhobo sokuHlawula sam
Ibhanki yakho izabalazela ukugcina isicelo sabantu abajonga iiakhawunti zabo
iindidi Finance Personal tags IRS Post yokukhangela
Umyeni wam uyafudumala Ibhedi Isahluko 86 - 100 simahla kwi-intanethi
Ngaba iSaziso sikaRhulumente 1444 (EN-SP) Ileta evela kwi-IRS okanye kwiPhulo likaTrump